इस्तांबुल, टर्कीमा दाँतको सेतो लागत लाग्ने कति छ? - ठीक बुकिंग
दन्त उपचार दाँत व्हाइटिङ
इस्तांबुल, टर्कीमा दाँतको सेतो लागत लाग्ने कति छ?
8 जुन 2021 8 जुन 2021 ईयरबुक
टर्कीमा दाँत सेतो बनाउनको लागि मूल्य कति छ?
इस्तांबुल, टर्कीका धेरै दन्त चिकित्सा क्लिनिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई दाँत सेतो पार्ने प्याकेजहरू प्रदान गर्दछन् जसमा एयरपोर्टबाट होटल र क्लिनिकसम्म ट्रान्सपोर्ट, अनुवादकहरू (आवश्यक भएमा), परामर्श, दोस्रो राय डायग्नोस्टिक, र केस प्रबन्धक सहायता समावेश छन्।
यदि तपाईंलाई चाहिन्छ भने सस्तो दाँत विदेशमा सेतो पार्ने त्यसो भए इस्तानबुल, टर्की एक उत्तम विकल्प हुनेछ जुन तपाइँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। इस्तानबुलमा दाँत सेतो पार्नको लागि मूल्यहरू $$० को आसपास छ, तर अन्तिम लागत प्रक्रियाको जटिलता, क्लिनिक, क्लिनिक र तपाईंले छनौट गरेको डाक्टरको स्थान, सामग्री, उपकरण आवश्यक, दन्त चिकित्सकको विशेषज्ञता र अवधिमा निर्भर गर्दछ। उपचार।
टर्कीमा कसले दाँत पियाउन सक्छ?
निम्न शर्तहरू मध्ये एक वा बढीबाट पीडित जो कोहीले दन्त ब्लीच गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ:
एक व्यापक पैमाने मा दाँत दाग
बुढ्यौलीको परिणामको रूपमा दाँत विकृति
टेट्रासाइक्लिनको साथ दाग
सुर्तिजन्य सेवनले दाँत बिगार्ने काम गर्दछ।
टर्कीमा कसले दाँत सेतो बनाउन सक्दैन?
टर्कीमा दाँत सेतो प्रक्रिया जिing्गिभाइटिस भएका वा गम रोग भएका बिरामीहरूको लागि संकेत गरिएको छैन। दन्त ब्लीचिंग गर्नु अघि, महत्वपूर्ण गुहाका बिरामीहरू वा पर्याप्त दन्त मर्मतको आवश्यकता पर्ने बिरामीहरूले यी प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्दछ।
रक्सी र मदिरा सेवन गर्नेहरूले शल्यक्रिया गर्नबाट जोगिनु पर्छ किनकि हाइड्रोजन पेरोक्साइडले दाँतको एनेमेललाई हानि पुर्‍याउन सक्छ जब भारी धुम्रपान र मदिरा सेवनको साथ जोडी बनाइन्छ।
दाँतको ब्लीचिंग अपरेसन सम्पन्न भएपछि दाँतको ब्लीचिंग अपरेसन पूरा भएपछि दाँतको बिभिन्न प्रक्रियाहरू छनौट गर्न बिरामीहरूले फरक दाँत प्रक्रियाहरू छनौट गर्न सक्दछन्, जसले गर्दा सबै दाँतहरूको समान उपस्थिति र ट्रान्सप्लसन्सी छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
टर्कीमा दाँत पखाल्ने काम कसरी गरिन्छ?
टर्कीमा दाँत सेतो पार्दै एक आधारभूत कस्मेटिक दन्त चिकित्सा प्रविधि हो कि दाग दाँत को उपस्थिति सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। अपरेशन सरल र सुरक्षित छ, केवल थोरै खतराहरू सम्बन्धित छ।
दन्त चिकित्सकले बिरामीको मसुरहरूमा सबैभन्दा पहिले विशेष समाधान ल्याउँदछ, जसले दाँतमा सेतो पार्ने कामको क्रममा मਸੂहरूलाई बचाउन रासायनिक अवरोधको रूपमा काम गर्दछ।
त्यसपछि सेतो पार्ने दांत दाँतमा सेतो दाँतले दाँतमा लागु गरिन्छ - यो ब्लीच-आधारित समाधान हो जुन विशेष गरी दन्त प्रक्रिया र दन्त मर्मतको लागि लक्षित छ।
सेतो समाधान प्रयोग गरेपछि दाँतहरू सेतो पार्ने दन्त चिकित्सकले प्रकाश र तातो मिश्रणको प्रयोग गरेर यसलाई सक्रिय पार्दछ, दाँतको तामचीनीबाट सफलतापूर्वक कुनै दागहरू हटाउँछ। अपरेशनको यस चरण समाप्त भएपछि, क्षेत्र सफा हुन्छ र प्रविधि दुई पटक दोहोरिन्छ। दाँतहरू सेतो पार्ने दन्तचिकित्सकले एकपटक ईच्छा गरिएको प्रभाव प्राप्त भएपछि गममा राखिएको अवरोध हटाउनेछ, र बिरामी घर फर्कन सक्षम हुनेछ।
जरा नहरको उपचार गरीएको दाँतले दाँतमा सेतो दाँत भएको घोललाई राम्रो प्रभावको लागि जरामा गहिरो ईन्जेक्सन दिएर लाभान्वित हुन सक्छ।
तुर्की मा दाँत पहेँतो पहिले र पछाडि
अपरेसन पछि, अधिकांश व्यक्तिहरू अधिक आत्मविश्वास र सामाजिक परिस्थितिहरूमा सहज महसुस महसुस गर्दछन्। यो सम्झन महत्वपूर्ण छ दाँत सेतो पार्ने वा दन्त ब्लीच गर्ने दीर्घकालीन समाधान होईन। नतिजालाई सँभाल्नको लागि बिरामीहरूलाई विशेष पेय वा खाद्यान्न पछ्याउने खानाहरू त्याग्न आवश्यक पर्दछ। केही व्यक्तिहरू दोस्रो दाँतमा सेतो पार्ने शल्यक्रिया छनौट गर्छन् जुन शुरुको दसदेखि बाह्र महिना पछि।
सोडा वा कफी जस्ता धेरै धुमिने पेय पदार्थ पिउने बिरामीहरूलाई केहि महिनामा अर्को अपरेशनको आवश्यक पर्दछ। चुरोट दाँतको दाँतको दाँत पनी चल्दा दाँत अँध्यारो हुनुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। यस डार भनेको दाँतलाई कालो पार्ने हो, र ब्रशिंगले यसको छुटकारा पाउनेछैन। नतिजाको रूपमा, बिरामीहरूले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ उनीहरूको नयाँ मुस्कानलाई लामो समयको लागि राख्न।
टर्कीमा माथिल्लो र तल्लो जाभाको लागि लेजर दाँत कतीको सेतो छ?
टर्कीमा दाँत सेतो पार्नको औसत मूल्य २ 290 ० छ। हाम्रो विश्वसनीय दन्त चिकित्सा क्लिनिकहरु तपाईलाई २ 250० charge को लागी शुल्क लिनेछ टर्कीमा माथिल्लो र तल्लो जबडा लेजर दाँत सेतो पार्दै। तपाईंले पाउनुहुने सबै दन्त उपचारहरूमा years बर्षको ग्यारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ जुन ठूलो लाभ हो जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न।
लेजर दाँत सेतो पार्नको साथसाथै, तपाई घरको सेतो पार्ने किट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। टर्कीमा एक घर सेतो किटको लागि मूल्य मात्र १£० छ। यस प्रकारको उपचारको लागि, दन्त चिकित्सकलाई दुई पटक आवाश्यक हुन्छ। छापहरू तपाइँको प्रारम्भिक भेटघाटमा लिइन्छन् र प्रयोगशालामा पठाइन्छ, जहाँ तपाइँको दाँतमा फिट हुने ट्रेहरू सिर्जना हुन्छन्।
तपाईंले आफ्नो दोस्रो भ्रमणमा ट्रे र ब्लीचिंग जेल छान्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तपाईंको दन्त चिकित्सकद्वारा प्रदर्शन गरिनेछ। संक्षेप मा, जेल को एक सानो रकम दुबै ट्रे को दाँत मा फिट हुनुभन्दा पहिले लंबाई संग धक्का छ। धेरै बिरामीहरूले जेलको दुई हप्ताको आपूर्ति प्राप्त गर्दछन्, जुन उनीहरूले हरेक रात दुई हप्ता प्रयोग गर्दछन्, वा उनीहरूको सेतो परिणामसँग सन्तुष्ट नभएसम्म। अधिक जेल तपाइँको स्थानीय दंत चिकित्सक बाट उपलब्ध छ।
के यो टर्कीमा दाँत सेतो बनाउन लायक छ?
यो धेरै बिरामीहरूसँग भएको मुद्दाको लागि सरल र लागत प्रभावी जवाफ हो। यो सबै तपाइँको दाँत को र you तपाईं कस विचलित मा निर्भर गर्दछ। विचार गर्नुहोस् टर्कीमा लिबास वा मुकुट प्राप्त गर्दै यदि तपाईं आफ्नो दाँत चहकिलो सेतो हुन चाहनुहुन्छ भने। प्रक्रियाले प्रत्येक बिरामीको दाँतमा विशिष्ट प्रभाव पार्दछ। केही व्यक्तिहरूले दुई छायाँ सुधार प्राप्त गर्दछन्, जबकि अरूले चार वा पाँच छायाँ सुधार देख्दछन्। हामी तपाईंहरूलाई दाँत कस्तो देखिन्छ भनेर ठ्याक्कै बताउन सक्दछौं यदि तपाईंले लिne्ग वा मुकुट पाउनुभयो भने। दाँत सेतो पार्नेसँग, यो केस हुँदैन।
के दाँत सेतो पार्दै खतरनाक वा अस्वास्थ्यकर छ?
प्रक्रिया सही तरीकाले दाँत क्षतिग्रस्त छैन। ब्लीचिंग जेल मसूड र घाँटीबाट टाढा राख्नुपर्दछ। दाँत सेतो भएपछि गमको संवेदनशीलता देखा पर्न सक्छ। यो पूर्ण सामान्य हो, र चीजहरू चाँडै सुधार हुनेछ। दन्त सेतो पार्ने एलर्जीको कुनै रिपोर्ट आएको छैन।
दाँत सेतो पार्ने बारे प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
के तपाईंको दाँतको रंग तपाईंको समग्र दन्त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ?
होईन, तपाइँको दाँतको रंगमा तपाईको दन्त स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्दैन। यो व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फरक हुन्छ, ठीक कपाल र छालाको र like्ग जस्तै। केहि मानिसहरु का दाँत कालो सेट छ, जबकि कोहीको उज्यालो सेट छ। त्यो एकदम विशिष्ट छ।
मेरो दाँत बिग्रेको छ भने म के गर्न सक्छु?
खाना दाँत बिघटनको एक साधारण कारण हो। चिया, कफि, रातो वाइन, र निकोटीन सबै त्याग्न पर्छ। एक दाँत सेतो पार्ने प्रक्रिया प्राकृतिक रूपमा यस्तो विकृति सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के म दाँतमा सेतो पार्न सक्छु यदि मँ दाँतमा ठूलो दाँत भरिएको, मुकुट, वा मेरो मुख मा veneers?
हो, तपाईं पक्कै सक्नुहुन्छ! फिलि Fi र मुकुट, अर्कोतर्फ, कुनै सेतो हुँदैन। यदि उनीहरू तपाइँको मुखको पछाडि छन् भने यो समस्या होईन। दाँत सेतो पार्नु उचित हुँदैन, यदि तपाईंसँग भरे स्थानहरूमा ठूला ठाउँहरू वा मुकुटहरू छन्।
मेरो दाँतमा ती दागहरू छन्। दाँतको सेतो पार्नेले यसलाई निको पार्न सम्भव छ?
होईन, दन्त सफा गर्नेले तपाईंको दाँत केवल उज्यालो र सेतो पार्नेछ। यदि तपाईको आनुवांशिक वा औषधि प्रयोगको परिणाम स्वरूप दाग छ भने। यसलाई सच्याउनको लागि, तपाईंले लिबास वा मुकुटहरू लिने बारे विचार गर्नुपर्छ। दाँतको सेतो पार्दा तपाईंको दाँतमा कुनै पनि विकिरण नै रहनेछ।
तपाईको दाँत सेतो भएपछि तपाईले के गर्नु पर्छ?
तपाईं एकै तरीकाले आफ्नो दाँत माझ्न सक्नुहुन्छ। कृपया तल दिइएका खानाहरू पहिलो hours 48 घण्टाको लागि बेवास्ता गर्नुहोस्। चिया, कफी, सोडास, सिगरेट, रातो वाइन, चकलेट, टमाटर पेस्ट, केचअप, चेरी, अनार, ब्ल्याकबेरी, क्रैनबेरी र जडिबुटीहरू।
एसिडिक र चिसो पेय पदार्थ, साथै तातो खानाले तपाईंलाई अधिक संवेदनशील बनाउन सक्छ। यो प्रक्रिया पछि केहि संवेदनशीलता अनुभव गर्न विशिष्ट छ। यो एक दिन भित्र गायब हुन्छ। दाँत सेतो राख्न, आफ्नो नियमित मौखिक स्वच्छता तालिका संग जारी राख्नुहोस्।
टर्कीमा दाँत पखाल्ने खर्च कति हुन्छ? दाँत ...
टर्कीमा उही दिन दांत प्रत्यारोपण
दाँत लिनेहरू के हुन्?
दाँत मा क्राउन एक राम्रो विचार हो?
टर्कीमा डेन्टल क्राउनको औसत लागत कति हो?
टर्कीमा कम्तीमा भेनेदारहरूको पूर्ण सेट कति छ? भेनेर्स लागत
← टर्कीमा दाँतको सेतो बनाउन कति खर्च हुन्छ? विदेशमा दाँत उपचार
टर्कीमा एक हलिउड मुस्कानको लागि कति खर्च हुन्छ? →